सिंगापुरमा नेपाली टोलीको अपमान ! - Nepal's Digital News Paper
सिंगापुरमा नेपाली टोलीको अपमान !
काठमाडौं । टी–२० विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना सिंगापुरले चकनाचुर पारिदिएको छ । सिंगापुरको इन्डियन एसोसिएसन क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको आईसीसी टी–२० विश्वकपकोे एसिया क्षेत्र छनोटको अन्तिम खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग पराजित भएको हो । सिंगापुर समूह विजेता बन्दै ग्लोबल छनोटमा पुग्दा नेपाल उपविजेतासम्म पनि बन्न सकेन ।
Photo source cricketingnepal
कतारले नेपाललाई तेस्रो स्थानमा धकेलेको छ । दुई खेल जितेको नेपाल ४ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रह्यो। ४ अंकै भए पनि नेपाललाई रनरेटमा उछिन्दै कतारले दोस्रो स्थान ओगटेको छ। नेपाललाई पहिलो खेलमै कतारले ४ विकेटले पराजित गरेको थियो । आइतबार सुरुमा भने नेपाललाई उपविजेता घोषणा गरी खेलाडीलाई मेडलसमेत लगाइदिएको थियो । नेपाललाई उपविजेताको ट्रफी दिने बेला भने मेडलसमेत खोसिएको थियो । नेपालका टिम म्यानेजर रमण सिवाकोटीले मेडल फिर्ता गरेका थिए ।